Gbasara Anyị - Chain Supply Next
Itufu bụ otu ụdị azụmaahịa ama ama n’oge a. O guzosie ike dị ka ọrụ dị mkpa na obere itinye ego na mgbanwe. Agbanyeghị, ịtọlite ​​ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na igosipụta ngwaahịa gị ezughi; nkwalite na afọ ojuju ndị ahịa na-arụ ọrụ dị mkpa iji mee ka azụmaahịa ọ bụla nwee ọganiihu. Otu onye azụmaahịa dị otú a, nke na-arụ ọrụ dị ka ikpo okwu iji rụọ ọrụ azụmaahịa gị na-akwụghị ụgwọ n'ụwa niile bụ Nextschain.
Nextschain anọwo na tụlee maka amazon, ebay, aliexpress maka afọ 7. Anyị na-ejikwa ọtụtụ puku ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ dị elu na China iji nye ihe karịrị 400,000 ngwaahịa dị elu maka ịre. Nextschain na-enye ndị ọrụ ohere ilekwasị anya na akụkụ ahịa na azụmaahịa, ebe ndị ọkachamara ha na-ejikwa ngwaahịa na usoro mbupu. Ọnụ ahịa ahịa ha kacha mma n'ahịa, nke na-enye ha ohere irite uru dị elu ma bulie ego ha ga enweta.
Nextschain bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwaahịa ole na ole na-ebufe iwu n'ọtụtụ mba na ọnụahịa dị ọnụ ala. Usoro ọgụgụ isi ha nwere ọgụgụ isi na-agbanwe na-akpaghị aka ma na-ebufe iwu n'ọdịnihu tupu oge dị elu dị ka Black Friday ma ọ bụ Christmas maka nnyefe oge. Ọtụtụ ndị na-enye ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ibipụta ozi ụlọ ọrụ onye ọrụ na akwụkwọ ọnụahịa. Nextschain na-enyere akwụkwọ ọnụahịa ahaziri n'efu na iwu niile.
Karịsịa, ebumnuche anyị bụ inyere ọtụtụ ụlọ ọrụ aka belata ọnụ ahịa ma chekwaa oge dị ukwuu na azụmaahịa E-commerce ha. Site na nkwụsị nkwụsị nkwụsị anyị, anyị na-enyere aka ịzụta ihe n'aka ndị na-eweta anyị, nyocha dị mma, jụọ n'ọnọdụ dị mma ma jikwaa ozi nchọta niile. Ihe ndị ahịa anyị na-eme bụ ị attentiona ntị na ịzụlite azụmaahịa. Site na ọrụ mgbagha nke NextsChain, ndị ahịa nwere ike ilekwasị anya na mma yana ogo ma bulie azụmaahịa ha.
Anyị na-agbasi mbọ ike imezu ebumnuche a site na ime ka ịmekọrịta ngwaahịa dị mfe maka ahịa na-apụta nke nde nde ndị ọchụnta ego na web yana na-abanye n'ụdị ịmalite na / ma ọ bụ na-etolite azụmaahịa mkpọsa.